Saturday February 17, 2018 - 10:57:53 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Xildhibaanada Koonfureed sidii bay gubeernada wali war uun ula gocleeyaan, gar hunguri ah mooyee wax kale uma goleeyaan dheh, sidii bay geddeedi shaxaad go'a u feytaan dheh, sidii bay u gadaan guntiyo dhulka Koonfur gowraca lagu hayo, gowsaha sidii bay jubbo gooynta u gala geyn dheh, sidii bayna kuraas ayan geyn ugu gardaadaan dheh, sidii bay u kala gaabineyn gelid xafiis dheh, gam noqdooyin sidii buu midba midi u guulaalaa dheh. waxse igala gawaawiir ah baan gelin dhaaxa sheegay, gooraamaha hore waxaa igala sii giiran, waana dhowr guul-daro sey ku timid aan la garanayn dheh.
sidii bayna kuraas ayan geyn ugu gardaadaan dheh, sidii bay u kala gaabineyn gelid xafiis dheh, gam noqdooyin sidii buu midba midi u guulaalaa dheh. waxse igala gawaawiir ah baan gelin dhaaxa sheegay, gooraamaha hore waxaa igala sii giiran, waana dhowr guul-daro sey ku timid aan la garanayn dheh. Koonfur soo gudubto wixii goob u gaamuraye, dhallintii gobayn lahayd dalkii jiiddaan soo galaye, waana ayagan gidaarada tan Xamar kuman gandoodaane.isgedaafin kumaan waa ayagan giirka dheer fiirine, kumanyaal isgiijin iyo waa taa gaatin soo hooyada è, muruqooduse geestuu la'yahay baan la garaneyn dheh. kuwii galay iskuulkee la islahaa gabalkan wey dhaami, goortay ebyeenbay golay dhan kale u qooqeene, aqoontoodase geestay la'dahay baan la garanayn dheh. gallad ma laha nin jaamci goobtii gabay, wey garab mareen guud ahaan xaqii loo gemaamadaye, cilmigoodu geestuuse la'yahay baan la garanayn dheh. culimadii jihaad inay galaan lagu goleynaayey, oo ayagoo wada gooni ah naskii wada garwaaqsiisan, waxayse faralka uga gaabsadeen baan la garanayn dheh. askaraha Koonfureed garaaddada taxdee gaardiga cayaari, een guubaabadaan bixinaba aan camal guhaadaynin, warankuudo iyana geestuu la'yahay baan la garanayn dheh. kuwa ganacsanaayee rogrogan golosha iyo moodka, ee ribix u guureynayee shilin u guureeya, iyana wax galkoodu geestuu la'yahay baan la garanayn dheh. aan hadalka gooye waxaan kugu gabangaabshay, ujeedada gamuuro ee waxaan kugu gabalaacshay, iyagaan ila gurguuran mooyaane waxaan goodi ku idleeyey, halhayskii gaboobiyo murtidii guudcadde u sheegay in galoolna dhaan ugu maqnayn Koonfur baan geddeed ahay dheh.